> Resource> iPhone> 9 na-Dos mgbe na-A New iPhone
Mgbe na-a ọhụrụ iPhone, e nwere otutu ihe ndị ị ga-eme. Otú ọ dị, ị kwesịrị ị na-etinye ihe mbụ mbụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ gị na mbụ iPhone. Iji mee ka gị iPhone arụ ọrụ kwesịrị ekwesị, e nwere 9 na-dos mgbe ị na-a ọhụrụ iPhone. Lelee ha.
1. Wụnye iTunes
iTune bụ karịa ngwá ọrụ na-enye gị ohere ịzụta ma kpọọ music na vidiyo. Mgbe ọ na-abịa iPhone, ọ bụ ngwá ọrụ dị ike na ọ bụghị naanị na-enyere gị mbubata music, videos, photos, eBooks, pọdkastị, na ndị ọzọ ka gị na iPhone, kamakwa a ngwá ọrụ nke ga-enyere gị aka rụọ ọrụ, ndabere na weghachite iPhone. Ọ bụ ihe dị oké ngwá ọrụ na-eme ka iPhone arụ ọrụ kwesịrị ekwesị. Mgbe na-a ọhụrụ iPhone, ị ga-aga Apple si ukara saịtị download iTunes na wụnye ya na kọmputa gị.
2. Mepụta ihe Apple ID
Otu Apple ID bụ a ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji gị iPhone kwesịrị. Apple ID dị mkpa n'ebe nile: iTunes Store, App Store, iCloud, iMessages, Facetime, na na. Na ọbụna na ị chọrọ ịjụ ajụjụ banyere gị iPhone, ị na-kwesŽrŽ banye na discussions.apple.com na gị Apple ID. Na-eke ihe Apple ID bụ ezigbo mfe. E nwere otutu ohere ịmepụta otu Apple ID: na iTunes Store menu, e nwere otu nhọrọ 'Mepụta Apple ID'; Na Apple ukara saịtị, ị nwere ike na-emeghe webpage na-eso kpaliri ịmepụta otu Apple ID;
3. Mee ọ rụọ ọrụ gị iPhone
Mgbe wụnye iTunes na kọmputa gị na-eke ihe Apple ID, mgbe ahụ, i nwere ike rụọ ọrụ gị iPhone ugbu a. Iji rụọ ọrụ gị iPhone, biko hụ na i nwere a SIM kaadị maka iPhone nlereanya. Bụrụ na ọ bụghị, biko kpọtụrụ gị ụgbọelu, na-agwa ha na unu mkpa a ọhụrụ SIM kaadị maka ọhụrụ gị iPhone. Lee ndị dị mfe nzọụkwụ iji rụọ ọrụ gị iPhone:
1). Jiri iPhone SIM kaadị idaputa ngwá ọrụ na-emeghe SIM kaadị tree na-etinye na kaadị SIM gị;
2). Jituo Tetanụ / Ụra bọtịnụ na n'elu nke iPhone Malitegharịa ekwentị ahụ na ngwaọrụ ahụ;
3). Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na ya eriri USB na ẹkedori iTunes;
4). Soro kpaliri na iTunes iji rụọ ọrụ gị iPhone.
Iji nweta ihe ọmụma banyere otú iji rụọ ọrụ iPhone, biko agụ ndu >>
4. Mee ọ rụọ ọrụ iMessage & FaceTime
Mgbe rụọ ọrụ gị iPhone, mgbe ahụ ị na-kwesŽrŽ rụọ ọrụ iMessage na Facetime na gị iPhone. Ị mara, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ka a anụ Wi-Fi, mgbe ahụ, i nwere ike iji 2 ọrụ maka free mgbe ederede ma ọ bụ na-akpọ ọzọ Apple ngwaọrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-eji cellular data, mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji kwụọ ụgwọ maka cellular data, ọ bụghị maka iMesssage na FaceTime.
Aka iMessage, pịa Ntọala> Ozi> n'aka na iMessage. Na mgbe ahụ enweta eziga na-enweta, si ebe a, banye gị Apple ID ejikọta nọmba ekwentị gị na gị Apple ID. Mgbe ahụ, Apple ngwaọrụ ọrụ nwere ike ezitere gị ozi ederede ma na nọmba ekwentị gị ma ọ bụ gị Apple ID email adreesị.
Aka Facetime on iPhone, pịa Ntọala> FacetTime> gbanye FaceTime. Na Ị pụrụ ruru site FaceTime ebe, gị banye Apple ID na njikọ nọmba ekwentị gị na gị Apple ID.
5. Mee elu iCloud
iCloud bụ mara mma dị mkpa ka ị bụrụ na ị chọrọ ndabere gị iPhone mfe ma ọ bụ ịkọrọ faịlụ n'etiti dị iche iche iOS ngwaọrụ. Mgbe na a ọhụrụ iPhone, ị kwesịrị ị na pịa Ntọala> iCloud> gị banye Apple ID. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ faịlụ ka ndabere ka iCloud site enyere ndị kwekọrọ ekwekọ ngwa.
6. melite Chọta My iPhone
Iji na-nche nke gị iPhone, ị kwesịrị ị na melite Chọta My iPhone. Mgbe enyere ya na iCloud, mgbe ọ bụla ị na-ahụ na ekwentị gị na-efu ọ bụ furu efu, ị nwere ike furu efu mode, gbanyụọ ma ọ bụ ihichapu gị iPhone remotely. Aka ya, pịa Ntọala> iCloud> Chọta My iPhone> swipe Mma My iPhone Gbanye.
7. Melite passcode ma ọ bụ Touch ID
Iji na-gị onwe ozi si na-ele ya anya ndị ọzọ accidently, ị kwesịrị ị enyere ndị Touch ID ma ọ bụ passcode. Touch ID ga na-agụ gị akara mkpisiaka ma mara onye ị bụ. Ọ bụrụ na ị họrọ mwube passcode, mgbe ahụ, oge ọ bụla, i nwere ịbanye passcode ka ohere ka iPhone. Melite passcode ma ọ bụ Touch ID, pịa Ntọala> Touch ID & passcode> nwee iPhone Kpọghe> mgbe ahụ ị nwere ike melite ma Touch ID na passcode. Maka nkọwa ndị ọzọ, biko gụọ otú iji Touch ID na iPhone >>
8. mmekọrịta Content ka iPhone
Ọ bụrụ na nke a bụ gị akpa iPhone na gị mbụ ekwentị bụ ihe gam akporo ngwaọrụ, mgbe ahụ i kwesịrị ịkpali kọntaktị site na gị Android ekwentị iPhone. Lelee otú nkọwa maka otú ime ya. Ọ bụrụ na nke a bụ gị abụọ iPhone, mgbe ahụ i kwesịrị ndabere gị ochie iPhone na weghachite ọhụrụ iPhone na-akpa iPhone si ndabere faịlụ. Na-etinye songs, vidio, na foto site na kọmputa gị ka gị na iPhone, i kwesịrị iji iTunes ka mmekọrịta ha ka ha iPhone. Lee ndị iji mmekọrịta ọdịnaya site iTunes ka iPhone
9. Download ngwa iPhone
iPhone abịa na ụfọdụ ndabere ngwa. Otú ọ dị, ọ bụ ezughị n'ihi na ị na-enwe ezi mobile ndụ. Ị kwesịrị ị na selectively download ngwa gị mkpa, dị ka iBooks maka ịgụ eBooks, Podcast ngwa na-egwu pọdkastị, Dropbox ịkọrọ faịlụ n'etiti iche iche na ngwaọrụ, wdg Ka ibudata ngwa, ị kwesịrị ị na ẹkedori App Store ngwa gị iPhone> search maka ngwa gị mkpa na Chakwasa ihie search> chọta ngwa gị mkpa ma pịa download> gị banye Apple ID.